‪#‎OromoProtests‬ , Jawaar Mohamed: Sa’aa kanarraa kaasuun tarkaanfii lubbuu of baraarsuu kamiiyyuu fudhachuun barbaachisaadha! -
‪#‎OromoProtests‬ , Jawaar Mohamed: Sa’aa kanarraa kaasuun tarkaanfii lubbuu of baraarsuu kamiiyyuu fudhachuun barbaachisaadha!
Beeysisa: Mootummaan wayyaanee waadaa cabsuun ummata nagaan hiriira bahe irratti tarkaanfii haleellaa fudhatee jira. Sa’aa kanarraa kaasuun tarkaanfii lubbuu of baraarsuu kamiiyyuu fudhachuun barbaachisaadha. daandiin gurguddaan hundi akka cufaman, waajjiraaleen ajajni cunqursaa irraa dabru tarkaanfii fudhachuun barbaachisaadha!!
Previous #‎OromoProtest,‬ underway West Arsi Wabe
Next ‪#‎OromoProtests,‬ Bordode town, West Harage